सन् २०३० मा चीन पहिलो र भारत दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र, अमेरिका तेश्रोमा झर्ने !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सन् २०३० मा चीन पहिलो र भारत दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र, अमेरिका तेश्रोमा झर्ने !
एजेन्सी । अबको एक दशकमा नेपालम्रा दुई छिमेकी संसारका २ ठूला अर्थतन्त्र हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अमेरिका भने तेश्रोमा स्थानमा हुने छ। बेलायती एक सर्भेक्षण फर्मले गरेको एक दशकको अनुसन्धानात्मक प्रक्षेपण अनुसार यस्तो देखिएको हो । उक्त फर्मका अनुसार इन्डोनेसियाले चौथो स्थान ओगट्ने छ । उक्त चार्ट यस्तो देखाइएको छ ।